थाहा पाउनुस यसरी भएको थियो भगवान रामको मृ’त्यु ! – " कञ्चनजंगा News "
थाहा पाउनुस यसरी भएको थियो भगवान रामको मृ’त्यु !
No Comments on थाहा पाउनुस यसरी भएको थियो भगवान रामको मृ’त्यु !
दुईजनाबीच कुराकानी चलिरहेको थियो, त्यतिबेलै ढोकामा ऋषि दुर्वासा पनि आए । उनले रामसँग कुरा गर्न चाहेको भन्दै लक्ष्मणबाट भित्र जाने अनुमति मागे। तर लक्ष्मणले जेठा भाईको आज्ञा विपरित आफूले त्यस्तो गर्न नदिने बताए।
त्यसबेला आफ्नो भाई लक्ष्मणलाई मृ’त्यु द’ण्ड पाउनुभन्दा पनि देशभन्दा बाहिर जान भने । त्यसबेला देशनिकालाको सजाय पनि मृ’त्युद’ण्ड बराबर नै थियो। तर लक्ष्मण आफ्नो जेठा भाई रामबिना एक क्षण पनि रहन सक्दैन थिए । आखिरमा उनले मृ’त्युद’ण्ड नै स्वीकार गर्ने निर्णय गरे।
← हस्पीटलमा करोडौं खर्च गरेर निको नभएको रोग निको हुने यस्तो अलौकीक ठाउ भेटियो म्याग्दीमा (भिडियो सहित) → प्रदीपको पर्खाईमा साम्राज्ञी !